Shina 5V sy orinasa mpanamboatra manga 5 Eigday
Controller: ambaratonga 3 bokotra iray
Heating pad ： 7.4V 12W / 5V 10W
Fotoana fanafanana: 3-8 ora
Faritra fanafanana: tratra havia, tratra ankavanana ary ny lamosina, faritra mafana 3
Kitapo bateria: 7.4V, 5200MAH
Fitaovana: landihazo, polyster sosona 3
Novokarin'ny mpamokatra izay manampahaizana manokana amin'ny kanto fitafiana mafana, ny mpamonjy nohafanain'ny Mpamonjy azo antoka fa mpifaninana mendrika. Azo ovaina izy io, mandeha amin'ny herin'ny USB ary mety tsara amin'ny sokajin-taona sy karazana vatana.
Ny akanjo mafana mafana rehetra dia fanavaozana ny fandraisana - na izany aza, ny fihemorana mahazatra zarain'izy ireo dia bateria be loatra izay mametra ny fivezivezena. Soa ihany fa tsy izany no zava-bitan'ny Mpamonjy.
Ny fitazonana ireo mpitia fanatanjahantena ririnina sy mpiasa an-kalamanjana ao an-tsaina dia namolavola ny akanjon'izy ireo izy ireo ka zara raha manelingelina ny bateria. Raha mitady hisoroka zavatra mavesatra sy tsy mampahazo aina ianao, dia azo jerena tokoa ny akanjo mafana nomen'ny Mpamonjy.
Tsy mila miandry ela intsony ianao vao hanafana miaraka amin'ity akanjo mafana ity. Namboarina izy io mba hahafahan'ny mpampiasa azy mahatsapa hafanana be ao anatin'ny segondra vitsy.
Na dia tsy misy loharanom-pahefana aza ny kit, dia manome mifanentana amin'ny ankamaroan'ny banky herinaratra, izay fanamorana. Amin'ny ankapobeny, ity dia safidy hentitra ho an'ny akanjo mafana, indrindra ho an'ireo izay mitady hijanona ho malemy paika rehefa hatoky ny rivotry ny ririnina.
1.Manaova plug USB.
2.Midira amina charger azo esorina.
3.Mifindra amin'ny charger azo esorina.
4. Kitiho ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny tratra mandritra ny roa segondra.
5. Jiro mena manelatselatra, midika hoe mandeha ho azy ny fanafanana.
6.Aorian'ny jiro mena dia miparitaka mandritra ny 5 minitra, avy eo mihodina ho maivana fotsy, midika mari-pana antonony.
7.Manitsy fanitsiana manana ambaratonga telo, ny jiro mena dia midika hoe hafanana hafanana miakatra hatrany.
Ny jiro fotsy dia midika hoe fanamafisana antonony tsy tapaka, ny hazavana manga dia midika fanamafisana ambany tsy tapaka.
8. Kitiho ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny tratra mandritra ny roa segondra, tapaka ny jiro ary ajanony ny hafanana.
Teo aloha: Ba kiraro nanafana SS06R
Manaraka: 5V Vest Mainty
Winter Rechargeable Electric 7.4V 2200mah Batte ...